जन प्रतिनिधी चुस्त हुन जरुरी : चिलको हल्ला चलाएर कुखुरा चोर्ने काँग्रेसको दाउ ! – ebaglung.com
२०७४ कार्तिक २१, मंगलवार ०६:०८	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
कमल पौडेल, बागलुङ खर्वाङ २०७४ कात्तिक २१ । संयुक्त बामगठवन्धनको जनप्रतिनिधि परिचालन कार्यक्रम अन्र्तगत बडीगाड गाउँपालिकाको भेला ग्वालीचौर खौलारमा सम्पन्न भएको छ । भेलाको उद्घाटन गर्दै नेकपा एमाले प्रदेश सदस्य तथा जनप्रतिनिधि परिचाल जिल्ला समितिका बागलुङका अध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनक पौडेलले केन्द्र देखि गाउँ सम्म वामपन्थीको सरकार निर्माण गरि देशलाई सम्बृद्ध वनाउने वताए । जनप्रतिनिधिहरु चुस्त हुनुपर्ने भन्दै पौडेलले राजनैतिक स्थायित्व र दुरदर्शी नेतृत्ववाट मात्रै मुलुकको सम्वृद्धि सम्भव भएकोले जनचाहना अनुरुप वाम गठवन्धन भएको वताए ।
नेकपा एमालेका जिल्ला उपसचिव तथा जिल्ला समन्वय समिति वागलुङका उपसंयोजक विष्णु भुसालले वाम पन्थीहरुको वहुमतको सरकारले ५ वर्षमा देशको मुहार फेर्ने भन्दै जनतालाई सचेत वनाउन जनप्रतिनिधीहरुलाई आग्रह गरे । राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु देश भित्रका कुनै पनि दल र नागरिकको दायित्व हुने भन्दै भुसालले वाम पन्थी गठवन्धनको सरकारले सो पुरा गर्ने भन्दै सवैलाई निर्वाचनमा होमिन आह्वान गरे ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सहसंयोजक तथा केन्द्रिय सदस्य राजिव घिमिरेले वामपन्थीको जित भैसकेको र घोषणा गर्न मात्र वाँकी रहेको वताए ।
सो भेलाले बडीगाड गाउँपालिकाका प्रमुख मेयरसिंह पाइजाको संयोजकत्वमा ३९ सदस्यीय जनप्रतिनिधि परिचालन समितिको गठन गरेको छ । कार्यक्रम बडीगाड गाउँपालिकाका प्रमुख पाईजाको अध्यक्षता, तथा नेकपा एमाले बडीगाड गाउँपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष कमलराज आचार्यको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
उयसैवीच बामपन्थी गठवन्धनको तर्फवाट बडीगाड गाउँपालिका वडा नं. २ को चुनावी समिक्षा तथा कार्ययोजना निर्माण गर्ने गरि वैठक तथा भेला सम्पर्क कार्यालय खर्वाङमा सम्पन्न भएको छ। सो भेलामा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास विभागका केन्द्रिय सदस्य सुनिल शेरचनले देशमा नेपाली काग्रेसले चिलको हल्ला चलाएर कुखुरा चोर्न लागेको आरोप लगाए । वामपन्थीहरुले अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्नु तर्साउने हल्ला भएको भन्दै राजनैतिक स्थायीत्वको लागी जनचाहना अनुरुप गठवन्धन भएको वताए ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय अधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य गंगा भुजेलले वामपन्थीको जित भै सकेको औपचारिकताको लागी मंसिर १० गते कुर्नु परेको वताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा अर्याल लगाएतले वोलेका थिए । कार्यक्रम नेकपा एमालेका ढालेन्द्र शेरचनको अध्यक्षता, नेकपा माओवादी केन्द्रका ढालेन्द्र वनको स्वागत मन्तव्य तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दोर्ण वनले संचालन गरेका थिए ।